Indlela ukupheka scones ne jam enziwe imvubelo inhlama?
Lush scones okuzenzela ne jam - yini okumnandi ngaphezulu? Kuyaphawuleka ukuthi ukulungiswa baking kudingeka imikhiqizo elula impela ezingabizi zidayiswa kuzo zonke esitolo. Yingakho iresiphi zithandwa kakhulu phakathi kwalabo uthanda Muffin khekhe, wenza eyakhe.
Step by step recipe for muffins ne jam
Ukwakha iqoqo abanjalo kungcono ukusebenzisa okuzenzela apula ukuvunwa. Isikhathi esining impela imikhiqizo esitolo iqukethe semali of isitashi. Ngaphezu kwalokho, siqu izithelo jam has a iphunga ocebile, okwenza Muffin esihlwabusayo ikakhulukazi.
I izingxenye ezidingekayo izihloko
Ukuze Muffin ne jam, ufuna ukulungisa imikhiqizo ezilandelayo:
ibhotela - 160 g;
amaqanda ezinkulu inkukhu - 2 PC.
ufulawa ezimhlophe kakolweni - 900 g (kuze test obukhulu);
ubisi fat (mhlawumbe angadle ngabuhle obutheni) - 800 ml;
isihlabathi Ushukela - Article 3.5. l.
granulated imvubelo ezomile - isipuni egcwele;
usawoti iodized encane - ½ spoon;
Apple jam ekhaya - kwalo yedwa;
ushukela oluyimpuphu - ukuhlobisa amakhekhe.
Pheka Muffin ne jam kumele kuqale nge inhlama nomkhombe imvubelo isizinda. Lokhu kudinga ukuba uthathe koqweqwe lwawo isitsha esikhulu, uthele kuwo ubisi fat nokushisa phezu ukushisa low mayelana 40 degrees. Ngaphezu kwalokho, ubisi iziphuzo efudumele kufanele aphelise ushukela. Ngemva kwalokho ezinoshukela kumelwe uthele ketshezi ezomile imvubelo luyimbudumbudu futhi ukulinda abo ukuvuvukala ingxenye yesine ihora.
Inqobo nje uma ingxenye yokugcina siphela ubisi, ungakwazi uqhubekele ukucutshungulwa amafutha okupheka. Kuyaphawuleka ukuthi ukulungiswa imiqulu efana avunyelwe ukusebenzisa imajarini ekhethekile wokubhaka. Nokho, sanquma ukuthatha ibhotela fresh and esihlwabusayo. Kuyadingeka ukuba zigcwale amanzi phezu ukushisa low ke kuphole kancane bese wengeza kuya ngobuningi nge iodized usawoti emihle, ngesiswebhu amaqanda ufulawa mhlophe futhi sifted. Ngenxa yalokho yokuhlanganisa zonke izingxenye ngenhla uthola i base enwebekayo elithambile, okuyinto kumele afakwe isitsha esikhulu, amboze nge indwangu ehlanzekile, eyomile futhi ikhava, bese wafaka ungcwecwe eduze amandla noma ibhethri.
Indlela Yokuthola isinkwa imiqulu ne jam uncoma ukumelana imvubelo inhlama e ukushisa noma esikhathini esingekho ngaphansi kwamahora nenxenye. Phakathi nalesi sikhathi nohlaka ECEBILE Kufanele usukume izikhathi 3 noma 4. Futhi isikhathi ngasinye, kutuswa ukuba kuntengantengise up ngenqindi yakhe, pre-ofakwe amafutha sunflower. Uma ungaphenduki, ke Batter kungaba "ukubaleka" emaphaketheni ngaphandle.
Inqubo ukwakha semifinished
Ngemva imvubelo base efanelekayo ngemva kwenye obminki, singakwazi sculpt ngokuphepha amahle bushelelezi imikhiqizo Semi-siphelile. Ukuze wenze lokhu, thatha isiqeshana of inhlama Roll it aphume ibhola nge ububanzi 5-6 amasentimitha. Kumele kukhunjulwe ukuthi ngesisekelo enqubeni ukwelashwa ukushisa kakhulu kwandisa ngosayizi. Ngakho-ke, uma uthanda ukusebenzisa scones miniature ne jam, ngaleso sikhathi eyayibizwa ngokuthi ukubaluleka kungenziwa kancane encishisiwe.
Ngaphezu kwalokho, kwakhiwa kusukela ibhola nhlama kufanele priplyuschit, walala phakathi 1 noma 2 dessert nezinkezo apula puree kanye onqenqemeni zaschepit ukuze ekugcineni usuke futhi bakha round nomumo bushelelezi. Ngemva yonke imikhiqizo Semi-siphelile usukulungele, kudingeka sigqoke ishidi, lezidlo ezinamafutha akahle, kokushiya ibanga ukusuka emaceleni izitsha kanye kusuka imiqulu eduze 2-3 amasentimitha. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi phakathi bayobhaka inhlama uvukile, kodwa imikhiqizo kungukuthi alahlane.
ukwelashwa ukushisa kuhhavini
Ball futhi imiqulu ezithambile apula ujamu kumele uzilungiselele kuhhavini at 190 degrees imizuzu 45-50. By endleleni, ngoba nezitini imikhiqizo kamnandi futhi mnandi lulwimi siphelile kungaba pre-gcoba washaywa inkukhu neqanda.
Uma Muffin khekhe agcwele isithelo usukulungele, kufanele niqaphele ukuba uthole okuphuma kuhhavini futhi ngokushesha gcoba ibhotela fresh (kokushisa). Le nqubo uyonika Muffin isicwebezelisi okumnandi, kanye ngibenze ithenda futhi esihlwabusayo. Okulandelayo, ukubhaka liyadingeka ukubeka on ipuleti esikhulu ufafaze phezu uqweqwe lukashukela noma emhlabathini nesinamoni.
okuphakelayo Proper imikhiqizo ocebile ukuba etafuleni
Njengoba ubona, scones ne jam iresiphi oluphakeme elula kuhlanganisa kuphela izingxenye etholakalayo. imikhiqizo enjalo desirably fed etafuleni usesimweni efudumele noma kushisa nge itiye, ukhokho noma ikhofi. Bon appétit!
Amacebiso awusizo emizi
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukulungiselela namakhekhe ezinjalo azibona kuphela ngezithelo jam, kodwa futhi, isibonelo, nanoma yimuphi ujamu obukhulu ngaphandle isiraphu, izithelo ezisanda kukhiwa noma amajikijolo. Noma ngisho ne ezifana imikhiqizo mnandi njengoju caramel noma marmalade.
Nososo kanye umhluzi ngoba inkambo main: zokupheka
Plums Tkemali - sauce okumnandi kunoma isidlo
Indlela Yokuthola chestnut okugazingiwe
Meatballs okumnandi irayisi kanye umhluzi
Ngiyocasha Amaqanda iresiphi
Bosch (microwave esishunyekiwe) isitatimende, ukubuyekezwa
Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi adenoidectomy e ingane?
Inhlama ngokuba waffles ngendlela yensimbi waffle
Okungekho emthethweni kabusha ukuhlela. ezinjenge elingekho emthethweni kuka okusongelayo?
Absolutism - kuwuhlobo amandla amadivayisi isimo
Seneca. umfundisi we uNero
Ingabe kunzima ukuba abe abafundi iziqu eJalimane?